အခြား Xiaomi မဟုတ်သောဖုန်းများတွင် MIUI 12 control center ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း Androidsis
အခြား Xiaomi မဟုတ်သောဖုန်းများပေါ်တွင် MIUI 12 control center ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
DaniPlay | | Android application များ, Android ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ
MIUI 12 ဒါဟာရှိပါတယ် ထိန်းချုပ်မှုစင်တာ ၎င်းကို iOS operating system ကအတော်လေးကိုစိတ် ၀ င်စားပါသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်မှုရှိစေရန်စီစဉ်ထားမှုများစွာရှိသည်။ ဒီစင်တာကိုသုံးရန် Xiaomi အမှတ်တံဆိပ်ပစ္စည်းရှိရန်မလိုအပ်ပါ၊ အကြောင်းမှာအလွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသွင်အပြင်ရှိသောအလွန်အရေးကြီးသည့်အသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင့်တွင် Android 5.0 (သို့) ပိုမိုမြင့်မားသောဗားရှင်းရှိပါကသင်သည်ဤထုတ်လုပ်သူအလွှာ၏ထိန်းချုပ်မှုစင်တာနှင့်ဆင်တူသည့်ထိန်းချုပ်မှုစင်တာနှင့်အတူဤကိရိယာကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ သငျသညျအပေါငျးတို့သရှိနိုင်ပါသည် ဤ MIUI 12 ထိန်းချုပ်မှုစင်တာမှပြသထားသောအသိပေးချက်များနှင့်အမြန်ချိန်ညှိချက်များ.
သင်၏ Motorola, Huawei, ZTE တွင်ပျော်ရွှင်မှုကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ သို့မဟုတ်မည်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မဆို၊ ဤအရာအားလုံးသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို၎င်းကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုမည့်ဤအပလီကေးရှင်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောကြောင့်။ ၎င်းသည်အလွန်ဖော်ရွေသော interface ကိုအသုံးပြုရန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
2 ဒါဟာအစငွေပေးချေမှု option ကိုရှိပါတယ်
သင်ထည့်သွင်းပြီးတာနဲ့ My Control Centre ကသင့်အား MIUI 12's My Control အကြောင်းအများကြီးသတိပေးလိမ့်မည်အကယ်၍ သင်အရင်ကမတွေ့ဖူးဘူးဆိုရင်၊ ဖုန်းထဲကနေအများကြီးထွက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတာကောင်းတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်၏ထိန်းချုပ်မှုစင်တာနှင့်အတူ Xiaomi ၏ပုံစံထက်ပိုမိုကြီးမားသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်၏ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာသည်ပိုမိုသန့်စင်သွားသည်။
ထို့အပြင်၎င်းကိုသင်တပ်ဆင်ထားပါကအရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုတွေ့လိမ့်မည် သငျသညျအကြှနျုပျ၏ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာကိုဖွင့်လျှင်လုံးဝပြောင်းလဲ layout ကိုကိရိယာ၏ကိုယ်ပိုင် interface ကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်။ App developer အနေဖြင့်အရာအားလုံး၊ interface, နေရာချထားမှုနှင့်ရွေးချယ်စရာများကိုအပြည့်အ ၀ ကူးယူလိုသော်လည်းကွဲပြားမှုအနည်းငယ်ရှိသော်လည်း။
con အကြှနျုပျ၏ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာအားလုံးကိုတစ်နေရာမှတစ်နေရာသို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အရာအားလုံးကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်၊ တစ်ခုချင်းစီကိုပြောင်းလဲရန်၊ desktop အိုင်ကွန်များချဲ့ရန်သို့မဟုတ်လျှော့ချရန်အတွက်အခြားအလုပ်များစွာမှခွင့်ပြုသည်။ သင်ရှိခြင်းမဟုတ်ငြူစူလျှင် Xiaomi ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာ ၎င်းသည်၎င်းကိုအခမဲ့ကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့်အခမဲ့အသုံးပြုရန်အခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။
ဒါဟာအစငွေပေးချေမှု option ကိုရှိပါတယ်
သငျသညျအများအပြားပိုပြီး features တွေသော့ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင် အကြှနျုပျ၏ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာ ထို့အပြင်ပေါ်လာသောကြော်ငြာအနည်းငယ်ကိုဖယ်ရှား။ သင်သည် ၂.၇၉ ယူရိုဖြင့်လျှောက်လွှာကို ၀ ယ်ယူနိုင်လိမ့်မည်။ Myjust စင်တာကိုအသုံးပြုခြင်းတွင်ပိုမိုချိန်ညှိမှုများနှင့်ပြည့်စုံသောဖွဲ့စည်းမှုရှိသည်။ မကောင်းတဲ့တစ်ခုကတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာဖြစ်ပေမဲ့အသုံးပြုရတာလွယ်ကူပါတယ်။
အကြှနျုပျ၏ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာ - ဖုန်းစိတ်ကြိုက်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » အခြား Xiaomi မဟုတ်သောဖုန်းများပေါ်တွင် MIUI 12 control center ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
Awesome App၊ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် !! ဒီလိုမျိုးစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်မွမ်းမံရန်အတွက် Xiaomi ဖုန်းကိုသုံးတာကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမထားပါဘူး ??